यिनै हुन् प्याराग्लाइडिङ तालिमको क्रममा फेवातालमा ज्या’न गु’मा’एका सैनिक जवान राजाराम ! - Nepali in Australia
March 17, 2021 autherLeaveaComment on यिनै हुन् प्याराग्लाइडिङ तालिमको क्रममा फेवातालमा ज्या’न गु’मा’एका सैनिक जवान राजाराम !
पाेखरा, ३ चैत । पोखरामा प्याराग्लाइडिङ प्रशिक्षणका क्रममा दुर्घटनामा परी नेपाली सेनाका एक जवानको मृत्यु भएको छ । सेनाले पोखरामा सञ्चालन गरिरहेको प्याराग्लाइडिङ तालिमका क्रममा फेवातालमा ख से का धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका घर भएका सैनिक जवान २३ वर्षीय राजाराम मगरको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास हमालले बताए ।
राजाराम सेनामा भर्ती भएको बल्ल ४ वर्ष पुगेको थियो। धादिङमा कक्षा १२ पास भएपछि उनी सेनामा भर्ती हुन रौतहट पुगेका थिए। त्यहीँबाट राजाराम सेनामा छनोट भएका थिए। उनका बुवा कुलबहादुर नेपाली सेनाकै हवल्दार भएर अवकाश लिएका थिए भने उनका दाजु ऋषि राना मगर अहिले नेपाली सेनामै छन्।
राजारामको मृत्यु भएपछि उनका बुवा कुलबहादुर, आमा राधाकुमारी र दाजु ऋषि अहिले पोखरा आएका छन्। उनीहरूलाई नेपाली सेनाले नै पोखरा ल्याएका हुन्। राजारामसँगै प्याराग्लाइडिङ तालिम लिइरहेका जवानहरू पनि प्रतिष्ठानको पो ष्ट मार्टम भवनमा पुगेका थिए।
उनका अनुसार दुर्घटनालगत्तै सेना र सशस्त्र प्रहरीले मगरलाई उद्धार गरी पोखरा–११ रानीपौवास्थित सैनिक अस्पताल पु¥याएकामा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । उनी सेनाको कालीजङ्ग गणमा कार्यरत रहेका थिए । मृ तकको शव सैनिक अस्पतालमा नै रहेको र परिवारका सदस्य आएपछि बुझाइने प्रहरीले जनाएको छ ।
पोष्टमार्टम भवन अगाडि राजारामका आमा राधाकुमारी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइनन्। सँगै तालिम लिइरहेका साथी गुमाउनुको पीडा सहकर्मी सैनिक जवानहरूको मुहारमा देखिन्थ्यो। दुर्घटनाका बारेमा आफूहरूले केही बताउन नसक्ने राजारामसँगै तालिम लिएका एक जवानले बताए।
प्रेम-पत्रको जवाफ नदिँदा कविताको ह’त्या, १६ वर्षका कृष्ण प`क्राउ